Aqal Sare oo codsaday ciidamo AMISOM ah inay ilaaliyaan amniga xaruntooda. – Madal Furan
Hoy > Warka > Aqal Sare oo codsaday ciidamo AMISOM ah inay ilaaliyaan amniga xaruntooda.
Aqal Sare oo codsaday ciidamo AMISOM ah inay ilaaliyaan amniga xaruntooda.
Muqdisho (Madal Furan) Gudoonka Aqalka sare u arrimiya ayaa ka codsaday Midowga Afrika ee AMISOM inay keenaan xarunta Xildhibaanadda Aqalka Sare ciidamo ka tirsan AMISOM.
Gudoomiyaha Aqalka Sare Mudane Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa si cad u bayaamiyey go’aankooda ku aadan in xarunta Aqalka Sare la keeno ciidamo ka tirsan AMISON, si ay u ilaaliyaan amaanka Xildhibaanadda iyo Xaruntaba.
Guddoomiyuhu wuxuu sheegay inay qoraal horay ugu gudbiyeen Taliska AMISOM qoraalkaasoo uu sheegay inuu gaaray ayna ka rajeynayaan in jawaab deg deg ah uga soo noqon doonto.
” Qoraal ayaan u dirnay AMISOM oon kaga dalbaneyno in ay noo keenaan ciidamo suga amaanka xarunta, arintan mudo ayey soo socotay aqalka sarana go’aan ayuu ku gaaray in ciidamo katirsan AMISOM xarunta la keeno” Ayuu yiri Gudoomiyaha Aqalka sare.
Lama oga sababta dhalisay in Xildhibaanadda Aqalka Sare ay xiligan u codsadaan ciidamo ka tirsan AMISOM iyadoo ay amaankooda ilaalinayeen ciidamo katirsan dowlada.
Xaaladan ayaa waxay muujineysaa inay jirto kalsooni xumo weyn oo soo kala dhex gashay Laamaha Dowliga ah oo ku kala shakisan dhinaca siyaasadda inay isu adeegsan karaan weeraro loo ekeysiiyo kuwa Al-shabaab oo kale.
Dhulgariir argagax geliyey dadka ku nool magaalada Nayroobi.